အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (Tick Off Those Minutes by Guy Perring) - Myanmar Network
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (Tick Off Those Minutes by Guy Perring)
Posted by Myanmar Network on July 20, 2011 at 13:20 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေ မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်၊ ခက်ခဲတယ်လို့ ထင်ကြတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကတော့ မှတ်တမ်းရေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအများစုမှာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ရေးပုံရေးနည်း ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခြေခံမူတွေ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ အကြောင်း အသုံးဝင်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တစ်ချို့လည်း ရှိပါတယ်။ ဘာတွေရေးရမယ် ဆိုတာသာမက ဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတာကိုပါ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းရေးရခြင်းအကြောင်းကတော့ အောက်ပါတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
• ဘယ်သူတက်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် မတက်ခဲ့သလဲ
• ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ သဘောတူညီခဲ့သလဲ
• အဲဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုစီကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသင့်သလဲ
• အဲဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုစီကို ပြီးစီးအောင်လုပ်ဖို့ နောက်ဆုံးအချိန်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ အချိန်ဇယား
အစည်းအဝေးမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပြောစကားဟာ အလွတ်သဘော ပြောရတာမျိုး ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းကတော့ စာစကားအသုံးအနှုန်းနှင့် တရားဝင်အလေးအနက် ဖော်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကို အာရုံစူးစိုက်ရပါလိမ့်မယ်
“Get hold of Emma Davies, she’s dealing with it, her extension number is 335 if you want to phone her.”
Emma ကို တွေ့အောင်ရှာ၊ ဒီကိစ္စကို သူကိုင်တာ၊ သူ့ဆီကို ဖုန်းဆက်ချင်ရင် လိုင်းခွဲနံပါတ် က ၃၃၅
The manager gave the Senior Cashier the name and telephone number of the person to be contacted.
မန်နေဂျာက အကြီးတန်းငွေကိုင်အား ဆက်သွယ်ရမည့် အမည်နှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးအပ်ပါသည်။
(ခ) Passive ကို ရွေးချယ်ခြင်း
"We will close the bank early on 28, 29 and 30 December, and on2January.”
ဒီဇင်ဘာလ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ နောက်ပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်မှာ ဘဏ်ကို စောစောပိတ်မယ်။
The bank will close early on 28, 29 and 30 December, and on2January.
ဘဏ်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၈၊ ၂၉နှင့် ၃၀ ရက်နေ့များ၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက်နေ့တို့တွင် အချိန်စော၍ ပိတ်ပါမည်။
(ဂ) အစီရင်ခံတင်ပြသော ပြောကြားချက်များ
အစီရင်ခံတင်ပြတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲက နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
The Section Head said that.....
• told the meeting
• informed the meeting
ဌာနခွဲမှူးက ... ဟု ပြောကြားသည်။
"We need further details of the project".
The representative requested/asked for further details of the project.
ကိုယ်စားလှယ်က စီမံချက်နှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ထပ် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ မေတ္တာရပ်ခံ ၊ တောင်းခံပါသည်။
(င) သတင်း အချက်အလက် တောင်းခံ မေတ္တာရပ်ခံခြင်း
"When will the project start?"
The Head of Finance asked/enquired when the project would start.
ငွေကြေးဌာနမှူးက စီမံချက် မည်သည့်အချိန်တွင် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
(စ) ထင်မြင်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း
“I think the meeting should be postponed until further information is available".
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက် ရတဲ့အထိ အစည်းအဝေးကို ဆိုင်းထားရမယ်ထင်တယ်။
The Chairperson felt/considered/thought that the meeting should be postponed until further information was available. နောက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိသည်အထိ အစည်းအဝေးကို ဆိုင်းငံ့ထားရန် သင့်တော်သည်ဟု ဥက္ကဋ္ဌက သဘောရ ၊ ယူဆ ၊ ထင်မြင် ပါသည်။
လုပ်ငန်းသုံး စာအရေးအသား အားလုံးမှာ သဒ္ဒါ တိကျမှန်ကန်ဖို့နဲ့ နိုင်နင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း ရေးရာမှာ တစ်ဆင့် ပြန်ပြောတဲ့ အသုံးအနှုန်း သဒ္ဒါကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သိရှိထားဖို့ အထူးသဖြင့် အရေးကြီးပါတယ်။
(က) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို Past tense အတိတ်ကာလနဲ့ ရေးသားလေ့ ရှိပါတယ်။
အဲဒီလို Past tense အတိတ်ကာလနဲ့ ရေးသားတဲ့အတွက် ဝါကျရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းက အခြား verbs ကြိယာတွေ အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း ပြောခဲ့တဲ့စကားက "There will beameeting next Wednesday." လာမယ့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ အစည်းအဝေးလုပ်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် မှတ်တမ်းရေးတဲ့အခါ The Chairperson agreed thatameeting would take place next Wednesday. လာမည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည်ဟု ဥက္ကဋ္ဌက သဘောတူခဲ့ပါသည်လို့ ရေးရမယ်။
Shall - Should/Would
(ခ) နာမ်စားတွေကိုလည်း ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
"We must receive your calculations before the end of March."
ခင်ဗျားတို့ တွက်ချက်ထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို မတ်လကုန်နောက်ဆုံးထားပြီး ကျွန်တော်တို့ ရမှဖြစ်မယ်။
He stressed that they had to receive their calculations before the end of March.
၎င်းတို့ တွက်ချက်ထားသော ကိန်းဂဏန်းများကို မတ်လနောက်ဆုံးထား၍ ရရှိမှဖြစ်မည်ဟု ၎င်းက အလေးအနက်ပြောကြားပါသည်။
(ဂ) အချိန်ကို ဖော်ပြတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလည်း ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
"The project will be completed next week."
He promised that the project would be completed the following week.
လာမည့်ရက်သတ္တပတ်တွင် စီမံချက်ပြီးစီးမည်ဟု ကတိပြုပြောကြားပါသည်။
အများဆုံး ပြောင်းလဲရလေ့ရှိတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကတော့
Yesterday - the previous day/the day before
Next week/month/year - the following week/month/the year after
Two weeks ago - two weeks previously
Ten months ago - ten months previously
(Guy Perring ၏ Tick Off Those Minutes အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်
ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/tick-off-those-minutes မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
အစညျးအဝေးတကျရောကျသူတှေ မလုပျခငျြတဲ့အလုပျ၊ ခကျခဲတယျလို့ ထငျကွတဲ့ အလုပျတဈခုကတော့ မှတျတမျးရေးရတာပဲဖွဈပါတယျ။ ကုမ်ပဏီအမြားစုမှာ အစညျးအဝေးမှတျတမျး ရေးပုံရေးနညျး ဆိုငျရာ ကိုယျပိုငျသတျမှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးတှရှေိကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အခွခေံမူတှေ၊ လုပျနညျးလုပျဟနျတှေ အကွောငျး အသုံးဝငျတဲ့ လမျးညှနျခကျြတဈခြို့လညျး ရှိပါတယျ။ ဘာတှရေေးရမယျ ဆိုတာသာမက ဘယျလိုရေးရမယျဆိုတာကိုပါ ဖျောပွထားပါတယျ။
အစညျးအဝေးမှတျတမျးရေးရခွငျးအကွောငျးကတော့ အောကျပါတို့ကို မှတျတမျးတငျဖို့ဖွဈပါတယျ။
• ဘယျသူတကျရမှာဖွဈပမေယျ့ မတကျခဲ့သလဲ
• ဘာလုပျငနျးတှလေုပျဖို့ သဘောတူညီခဲ့သလဲ
• အဲဒီလုပျငနျးတဈခုစီကို အကောငျအထညျဖျောဖို့ ဘယျသူ့မှာ တာဝနျရှိသငျ့သလဲ
• အဲဒီလုပျငနျးတဈခုစီကို ပွီးစီးအောငျလုပျဖို့ နောကျဆုံးအခြိနျသတျမှတျခကျြနဲ့ အခြိနျဇယား
အစညျးအဝေးမှာ အသုံးပွုတဲ့ ပွောစကားဟာ အလှတျသဘော ပွောရတာမြိုး ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ အစညျးအဝေး မှတျတမျးကတော့ စာစကားအသုံးအနှုနျးနှငျ့ တရားဝငျအလေးအနကျ ဖျောပွရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အောကျဖျောပွပါ သှငျပွငျလက်ခဏာတှကေို အာရုံစူးစိုကျရပါလိမျ့မယျ
Emma ကို တှအေ့ောငျရှာ၊ ဒီကိစ်စကို သူကိုငျတာ၊ သူ့ဆီကို ဖုနျးဆကျခငျြရငျ လိုငျးခှဲနံပါတျ က ၃၃၅
မနျနဂြောက အကွီးတနျးငှကေိုငျအား ဆကျသှယျရမညျ့ အမညျနှငျ့ တယျလီဖုနျးနံပါတျကို ပေးအပျပါသညျ။
(ခ) Passive ကို ရှေးခယျြခွငျး
ဒီဇငျဘာလ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ နောကျပွီးတော့ ဇနျနဝါရီလ ၂ ရကျမှာ ဘဏျကို စောစောပိတျမယျ။
ဘဏျကို ဒီဇငျဘာလ ၂၈၊ ၂၉နှငျ့ ၃၀ ရကျနမြေ့ား၊ ဇနျနဝါရီလ ၂ ရကျနတေို့တှငျ အခြိနျစော၍ ပိတျပါမညျ။
(ဂ) အစီရငျခံတငျပွသော ပွောကွားခကျြမြား
အစီရငျခံတငျပွတဲ့ စကားအသုံးအနှုနျးတှေ အမြားကွီးရှိတဲ့ထဲက နှဈသကျရာကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။
ဌာနခှဲမှူးက ... ဟု ပွောကွားသညျ။
ကိုယျစားလှယျက စီမံခကျြနှငျ့ပတျသကျ၍ နောကျထပျ အသေးစိတျ အခကျြအလကျမြား မတ်ေတာရပျခံ ၊ တောငျးခံပါသညျ။
(င) သတငျး အခကျြအလကျ တောငျးခံ မတ်ေတာရပျခံခွငျး
ငှကွေေးဌာနမှူးက စီမံခကျြ မညျသညျ့အခြိနျတှငျ စတငျမညျဖွဈကွောငျး မေးမွနျးပါသညျ။
(စ) ထငျမွငျခကျြကို ထုတျဖျောပွောကွားခွငျး
နောကျထပျသတငျးအခကျြအလကျ ရတဲ့အထိ အစညျးအဝေးကို ဆိုငျးထားရမယျထငျတယျ။
The Chairperson felt/considered/thought that the meeting should be postponed until further information was available. နောကျထပျ သတငျးအခကျြအလကျမြား ရရှိသညျအထိ အစညျးအဝေးကို ဆိုငျးငံ့ထားရနျ သငျ့တျောသညျဟု ဥက်ကဋ်ဌက သဘောရ ၊ ယူဆ ၊ ထငျမွငျ ပါသညျ။
လုပျငနျးသုံး စာအရေးအသား အားလုံးမှာ သဒ်ဒါ တိကမြှနျကနျဖို့နဲ့ နိုငျနငျးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အစညျးအဝေး မှတျတမျး ရေးရာမှာ တဈဆငျ့ ပွနျပွောတဲ့ အသုံးအနှုနျး သဒ်ဒါကို ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ သိရှိထားဖို့ အထူးသဖွငျ့ အရေးကွီးပါတယျ။
(က) အစညျးအဝေးမှတျတမျးကို Past tense အတိတျကာလနဲ့ ရေးသားလေ့ ရှိပါတယျ။
အဲဒီလို Past tense အတိတျကာလနဲ့ ရေးသားတဲ့အတှကျ ဝါကရြဲ့ အဓိက အစိတျအပိုငျးက အခွား verbs ကွိယာတှေ အပျေါမှာ သကျရောကျမှု ရှိမှာဖွဈပါတယျ။
တကယျတမျး ပွောခဲ့တဲ့စကားက "There will beameeting next Wednesday." လာမယျ့ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ အစညျးအဝေးလုပျမယျ ဆိုလို့ရှိရငျ မှတျတမျးရေးတဲ့အခါ The Chairperson agreed thatameeting would take place next Wednesday. လာမညျ့ ဗုဒ်ဓဟူးနတှေ့ငျ အစညျးအဝေးပွုလုပျမညျဟု ဥက်ကဋ်ဌက သဘောတူခဲ့ပါသညျလို့ ရေးရမယျ။
(ခ) နာမျစားတှကေိုလညျး ပွောငျးရမှာဖွဈပါတယျ။
ခငျဗြားတို့ တှကျခကျြထားတဲ့ ကိနျးဂဏနျးတှကေို မတျလကုနျနောကျဆုံးထားပွီး ကြှနျတျောတို့ ရမှဖွဈမယျ။
၎င်းငျးတို့ တှကျခကျြထားသော ကိနျးဂဏနျးမြားကို မတျလနောကျဆုံးထား၍ ရရှိမှဖွဈမညျဟု ၎င်းငျးက အလေးအနကျပွောကွားပါသညျ။
(ဂ) အခြိနျကို ဖျောပွတဲ့ စကားအသုံးအနှုနျးတှကေိုလညျး ပွောငျးလဲဖို့လိုအပျပါတယျ။
လာမညျ့ရကျသတ်တပတျတှငျ စီမံခကျြပွီးစီးမညျဟု ကတိပွုပွောကွားပါသညျ။
အမြားဆုံး ပွောငျးလဲရလရှေိ့တဲ့ အပွောငျးအလဲတှကေတော့
(Guy Perring ၏ Tick Off Those Minutes အားဆီလြျောသလို ဘာသာပွနျဆိုထားပါသညျ။ အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့
ရေးသားထားသော မူလဆောငျးပါးနှငျ့ အခွားစိတျဝငျစားဖှယျ ဆောငျးပါးမြားအား ဤနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။)
အထကျပါ ဆောငျးပါးအားကူးယူ၍ အခွား website နှငျ့ blog မြားတှငျ တငျမညျဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/tick-off-those-minutes မှကူးယူကွောငျး ထညျ့သှငျးဖျောပွပေးပါရနျ။
Permalink Reply by စိမ်းခက်စိုး on July 20, 2011 at 16:05
Thanks. Really supportive translation.
Permalink Reply by jack on July 20, 2011 at 16:46
Permalink Reply by Mi Nge on July 20, 2011 at 17:03
Permalink Reply by U Zaw Lynn Naing on July 20, 2011 at 17:09
Thanks . as for me so useful . see u !
Permalink Reply by hlahlaphyu on July 20, 2011 at 18:13
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on July 20, 2011 at 18:47
Permalink Reply by kyawnyein on July 20, 2011 at 21:31
Permalink Reply by panthandar on July 20, 2011 at 23:03
Permalink Reply by 1lkfj2py0jfss on July 21, 2011 at 10:36
Permalink Reply by hninnwaiwaisoe on July 21, 2011 at 10:41
Permalink Reply by Queen on July 21, 2011 at 13:25
Permalink Reply by Thandar Zaw on July 21, 2011 at 15:57